Maoritania: Voatazona tany am-ponja ilay mpanao gazety Hanevy Ould Dahah · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jona 2018 3:34 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, македонски, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Español, English
Tamin'ny volana Jona 2009, ny tranonkalan'ny Global Voices Advocacy no voalohany nitatitra fa nosamborina noho ny fanehoan-kevitra tao amin'ilay tranonkalan'ny mpanohitra Maoritaniana elatra ankavia Taqadoumy izay notantanany ilay mpanao gazety Maoritaniana Hanevy Ould Dahah. Raha nohelohina enim-bolana an-tranomaizina i Ould Dahah dia ny 24 Desambra 2009 no tokony hahazo fahafahana. Saingy, ny 26 Desambra, nilaza ilay bilaogera Nasser Weddady ao amin'ny Dekhnstan fa mbola notànana i Ould Dahah. Tao amin'ny lahatsoratra voalohan'ny bilaoginy, nanoratra izy hoe :
Nitatitra ihany koa i Nasser Weddady fa nanomboka nanao fitokonana tsy nihinan-kanina i Ould Dahah ny 28 Desambra 2009. Ny 5 Janoary 2010, nanameloka ireo manampahefana Maoritaniana tamin'ny fitazonana an'i Ould Dahah tany am-ponja taorian'ny daty voatondro ho famotsorana azy ny Komity Mpiaro ny Mpanao Gazety (CPJ). Avy eo nampahatsiahivin'ny Tambajotra Fampahalalam-baovaon'ny Zon'olombelona Arabo (ANHRI) ny governemanta Maoritaniana mba hanaja ny lalàna .
Mbola notanana i Ould Dahah araka ny tatitra nataon'ny gazety antserasera ny 15/01/10. Nanambara i Dekhnstan ny 14 janoary fa: